प्रचण्ड–ओली मिलाउने मै हुँ, मेरै घरमा पार्टी एकताको सहमति भयो ! गोबिन्द केसी दलाल हुन् तुरुन्त राजिनामा दिनु पर्छ – दुर्गा प्रसाई – (भिडियोसहित) – Etajakhabar
प्रचण्ड–ओली मिलाउने मै हुँ, मेरै घरमा पार्टी एकताको सहमति भयो ! गोबिन्द केसी दलाल हुन् तुरुन्त राजिनामा दिनु पर्छ – दुर्गा प्रसाई – (भिडियोसहित)
काठमाडौं – एमाले र माओवादीबिचको पार्टी एकता प्रक्रियाको अन्तिम टुङ्गो लगाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुर्गा प्रसाईको घरमा बसेर छलफल गरे । प्रसाईकै घरमा बसेर गरेको छलफलले नै एकता प्रक्रिया सहज भएको बताइन्छ । यसबिचमा प्रसाईको चर्चा पनि चुलियो ।
मेडिकल संचालन प्रसाईले राजनीतिक लाभ लिनका लागि आफ्नो घरमा नेताहरुलाई बोलाएर बैठक बसाउने, खाना खुवाउने गरेको आरोप पनि लाग्यो । दुर्गा प्रसाई तिनै ब्यक्ति हुन जसले झापामा बि एण्ड सी मेडिकल कलेज चलाएका छन् । यसै सम्बन्धमा ऋषि धमलाले उनै प्रसाईसँग अन्तरवार्ता लिएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बसहका लागि लिइएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईले माओवादी र एमालेबिच एकता गराउन भूमिका खेल्नभयो हैन ? माओवादी र एमालेका लागि भन्दा पनि राष्ट्रका लागि योगदान गरेको हुँ ।
तपाईले त केपी ओली र प्रचण्डलाई घरमा बोलाएर भोज खुवाउनुभयो नि ? मैले २००७ सालदेखिको राजनीतिलाई ओली र प्रचण्डलाई मेरो घरमा राखेर अन्तिम रुप दिएँ । तर मैल देश बेच्ने र देशद्रोहि काम गरेको होइन । प्रचण्ड र ओलीलाई मेरो घरमा राखेर वार्ता गराएर सफल बनाएँ । मैले देश जोड्ने काम गरेँ ।
त्यसोभए तपाईकै कारण प्रचण्ड र ओलीबिच एकता भएको हो ? मेरै घरमा बसेर मेरै कारणले एकता भयो । मैले गराएको हुँ । मेरो घरमा उहाँहरु पाँच घण्टा बसेर सहमति गर्नुभयो ।
पाँच घण्टा बस्दा केके भयो ? मैले केपी ओलीलाई आधा घण्टा सम्झाएँ । त्यसपछि दुईजनाबिच भटाभट सहमति भएको हो । मेरो घरमा तीन बुँदे सहमति भएको थियो । पार्टी एकता गराउनका लागि मेरो ९९ प्रतिशत भूमिका छ ।
केके सहमति भएको थियो ? माओवाद जबज भन्ने केके कुरा मिलेको थिएन । महाधिवेशनसम्म जाने विषयमा तीनवटा सहमति भएको थियो । मेरो घरमा तीन बुँदे सहमति भएपछि भोलिपल्ट वालुवाटारमा सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो । ठोस सहमति मेरै घरमा भएको हो । मेरो घरमा गएपछि बल्ल वार्ता सुध्रिएको हो । पछिल्लो पटक खाना खाएको फोटो मेरो ड्राइभरले फेसबुकमा हालेछ । त्यो कुरालाई लिएर ममाथि अनेक आरोप लगाए ।
तपाईको घरमा बसेर गोप्य वार्ता गरेको खाना खुवाएको तस्विर किन सार्वजनिक गरेको भनेर प्रचण्ड र ओलीले आपत्ति जनाउनुभयो नि ? मलाई उहाँहरुले केही पनि भन्नुभएको छैन । यो गोप्य राख्नुपर्ने बैठक पनि होइन । किनकी नेपालका दुई ठूला दलबिच एक हुँदैथियो । पत्रकारहरु पनि त्यहीँ थिए । मैले उहाँहरुलाई रक्सी खुवाएको थिइन । डान्सबार बनाएर हिरोनीहरु नचाएको थिइन । दालभात मात्रै खानुभएको थियो । सकारात्मक कुरा केही आएन । बदनाम गराउने प्रयास मात्रै भयो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण ११, २०७४ समय: ०:२१:०३